Kutheni uQhagamshelwano lweMvakalelo luya kuba siSitshixo kweli Xesha leHolide leMpumelelo yoThengiso | Martech Zone
Kangangonyaka, abathengisi bebejongana nefuthe lobhubhane kwiintengiso kwaye kubonakala ngathi indawo yokuthengisa iza kujongana nelinye ixesha lokuthenga elinzima leholide ngo-2021. ngokuthembekileyo kwisitokhwe. Iiprothokholi zokhuseleko ziyaqhubeka nokuthintela abathengi ukuba bandwendwele ezivenkileni. Kwaye ukunqongophala kwabasebenzi kushiya iivenkile zingxola xa kufikwa ekuboneleleni abathengi abawela umgaqo. Akukho nanye kwezi ndaba zolonwabo okanye eziqaqambileyo zentengiso yexesha leeholide.
Ngaphandle koluqikelelo olumfiliba, kubekho uphuculo oluninzi kumava okuthenga ezivenkileni. Uninzi lwabathengi bazonwabele izinto ezizalwe ngubhubhani ezinje ngokuthatha ecaleni kwendlela, iintlawulo ezingaqhagamshelwanga, kunye nokuhanjiswa kosuku olunye. Ezi mpawu zisebenza kakuhle kuba abathengi basabela kakuhle kubo. Xa umthengisi ezimisele ukwenza utshintsho kwaye asebenze nabathengi ukwenza amava okuthengisa angaqinisekanga abengcono kwaye alawuleke, wonke umntu uyaphumelela. Kule ndawo yokuthengisa, olo hlobo lokuguquguquka lucebisa ukuba luvelwano lwabathengi, hayi amaxabiso aphantsi, anokuthi ekugqibeleni athengise intengiso.
Uvelwano lwabathengi aluyonto intsha. Ngapha koko, iipesenti ezingama-80 zabathengi basekela izigqibo zabo zokuthengisa kwiimvakalelo.
Deloitte, Ukubonisa ixabiso lothethathethwano oluqhutywa yimvakalelo
Indlela abaziva ngayo ngemveliso okanye ngenkonzo, indlela evezwa ngayo kubo, kunye neemvakalelo zabo kumthengisi oyinikezelayo. Ukwenza unxibelelwano nabathengi ibisoloko isisithako esibalulekileyo kwintengiso, kodwa ngamaxesha anzima anjengala, uvelwano kunye nokwakha unxibelelwano oluqinisekileyo lweemvakalelo kunye nabathengi kunokunika ivenkile yakho ukhuphiswano olufunekayo.
Sele sibonile Ilandelayo-gen uvelwano faka umxube kunye nokuvela kwee-chatbots ze-intanethi, uluhlu lwezindululo, kunye nabancedisi bokuthenga. Ubukrelekrele bokwenziwa kunye ne-automation yemisebenzi ephindaphindiweyo yenkonzo yabathengi iphucule amava e-intanethi ngokuqinisekileyo, kodwa umda wabo wokusebenza ukhawulelwe kwimiba eqhelekileyo, ekulula ukuyilungisa. Ukukwazi kwabo ukukhawuleza kunye nokuvala ukuthengisa kuye kwaba yinto encinci kuphela. Kubonakala ngathi ii-chatbots zilungile ekufundeni izikripthi kodwa azikabi nayo eyenyani Persona oko kuya kubenza banxulumane ngakumbi - kwinqanaba leemvakalelo, ubuncinane.
Oko kwathiwa, enye indawo apho uvelwano lubonakala lusebenza kakuhle lukhona phila kwezorhwebo, amava okuthenga apho ulwazi lwemveliso kunye nobuhlobo bomdibaniso weentengiso zemveli zidibana nokuthengwa kwe-intanethi. Inkampani endayisekayo, GetBEE, ixhobisa iibrendi ukuba zibonelele ngeendwendwe zesayithi ye-ecommerce ngokuphila, intlalontle, iinkonzo ze-concierge zokuthenga - kunye nengcali ye-brand yokwenyani. Kwaye, ngenxa yolu nxibelelwano lwenziwa ngabantu, sibona amava emveliso kumndilili wama-25% wezinga loguqulo lokuthengisa. Oko kusebenza ngokumangalisayo xa kuthelekiswa nemilinganiselo ye-1 kunye ne-2% efunyanwa kwiindawo ezininzi ze-e-commerce.
Ngelixa ukucofa okukodwa kwiivenkile kunye ne-self-checkout kiosks zibonelela ngokulula kokuzenzekela, abathengi basaphoswa ziingcebiso kunye neengcebiso eziza nomthengisi onolwazi. Oko kuchukunyiswa komntu kulahlekile kumava okuthenga kwi-intanethi, kodwa ngenxa ye-5G kunye ne-bandwidth eyandisiweyo, ngoku kuyenzeka ukwenza uthethwano lwevidiyo ebukhoma kwisixhobo esiphathwayo somthengi kwaye uhambe nabo kwiimpawu zemveliso.
Aba bafowunelwayo, abathengisi be-intanethi bakha unxibelelwano lweemvakalelo kunye nabathengi be-intanethi. Baguqula izinto ezilindelweyo zibe yintengiso kwaye bade basebenzise amaqhinga okuthengisa anamandla. Ngaphezulu kokungqongqo kwemveliso okanye amaxabiso, luthethathethwano lomntu ngamnye olufunyanwa ngabathengi abaninzi lixabiso elitsha lokongezwa kumava abo okuthenga. Oku kubuza umbuzo, ukuba umntu okhuphisana naye uyakwazi ukunika olu hlobo lohambo lokuthengisa ngokweemvakalelo, ngaba banokukhetha inani labathengi bakho ngeli xesha leholide?
I-GetBEE iNcedisa amava okuthenga
'Eli lixesha lokuphucula amava okuthenga kubathengi bakho. Intuthuzelo kunye neemvakalelo ziyinxalenye enkulu yempumelelo yokuthengisa, egquma izinto eziphambili zangaphambili ezifana namaxabiso kunye nokunyaniseka kwebhrendi. Okumangalisayo kukuba, oosomashishini abathengisayo bahlala besoyika ukuba itekhnoloji iya kuthatha indawo yabo. Inyani yile, itekhnoloji incede ukubumba isazisi esitsha kunye nexabiso kumthengisi, kwaye kuya kuba ngumdla ukubona indlela indima eguquka ngayo njengoko urhwebo oluphilayo lukhula ekuthandeni kolu lutsha. uqoqosho lobudlelwane.
Bhukisha iDemo yeGetBee
tags: 5geCommerceimvakaleloukuthenga ngokweemvakaleloukuthenga ngokweemvakalelogetbeeukucofa-kanye ukuthengaamaqabane okuthengisa kwi-intanethikuthengwa kwi intanethiumncedisi wokuthenga kwi-intanethiUkuzihlolaezivenkileni
Iifomula ze-Excel zokuCocwa kweDatha ngokuQhelekileyo